Fanofanana an-tserasera | Hanan-dranomasina
Ny oniversite amin'ny atin'ny Reef Resilience dia natao mba hanomezana fahafahana miditra mora kokoa amin'ny siansa sy tetika farany indrindra amin'ny fitantanana ny haran-dranomasina amin'ny fiovan'ny toetr'andro. Fanamarihana: ny sasany amin'ireo fianarana dia misy amin'ny fiteny 3: Anglisy, Espanol, ary Français. Tsindrio amin'ny lohatenin'ny lalana etsy ambany mba haka ny dingana.
misokatra amin'ny varavarankely vaovaohisoratra anarana
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoCoral Reef Resilience
Ny Coral Reef Resilience Online Course dia natao hanomezana ny mpitantana sy ny mpikaroka an-dranomasina tontolo iainana ilaina hanohanana ny faharetan'ny haran-dranomasina manoloana ny fiovan'ny toetrandro. Ny fampianarana dia misy lesona enina izay mijery ny tontolo iainana ny tontolo iainana haran-dranomasina, ny fandrahonana ny haran-dranomasina, ny fitsipika ary ny toetran'ny fiaretana haran-dranomasina sy ara-tontolo iainana, torolàlana amin'ny fanombanana sy fanaraha-maso ny haran-dranomasina ho an'ny faharetana, ny foto-kevitra ary ny fampiharana ny fitantanana miorina amin'ny faharetana, ary ny paikady misy amin'ny fitantanana ny faharetan'ny haran-dranomasina. Ity fampianarana nohavaozina ity dia mampifangaro sy miorina amin'ny taranja “Fampidirana ny fiaretana amin'ny haran-dranomasina” sy ny “Fianarana mandroso amin'ny fametahana ny haran-dranomasina”, navoaka voalohany tamin'ny 2010.
Ecology Coral Reef - manome fampahalalana fototra momba ny ekolojian'ny haran-dranomasina, ao anatin'izany ny zavamiaina, ny habakabaka (ohatra, ny fananganana, ny zonation ary ny biogeography), ny vondrom-bahoakam-bato, ary ny fifandraisana amin'ireo toeram-ponenana hafa eo akaiky eo, hanohanana ny faharetan'ny tontolon'ny haran-dranomasina.
Fandrahonana amin'ireo haran-dranomasina - mamaritra ny loza mitatao amin'ny haran-dranomasina, ao anatin'izany ny fandrahonana amin'ny fiovan'ny toetrandro (oh: ny fiakaran'ny ranomasina sy ny fanamasinana ny ranomasina), ny fandrahonana ataon'ny olona eo an-toerana (toy ny fandotoana sy ny fanjonoana tafahoatra), ary ny fandrahonana biôkika (oh: ny aretina sy ny karazana manafika). Ity lesona ity dia milazalaza ihany koa ny fiantraikan'ireto fandrahonana amin'ny haran-dranomasina ireto, toy ny antony mahatonga ny hafanana mafana hamotsiana vatohara.
Fitsipika momba ny hamafin'ny haran-dranomasina - mamotopototra ny foto-kevitry ny faharetana, ao anatin'izany ireo singa mampiorina; fitsipiky ny faharetana amin'ny rafitra ara-tsosialy sy tontolo iainana; sy ny toetoetran'ny haran-dranomasina sy ny vondrom-piarahamonina miankina amin'ny haran-dranomasina izay mitarika amin'ny faharetana. Ny lesona dia mamaritra ihany koa ireo mari-pamantarana faharetana lehibe, izay ilaina amin'ny fitantanana ireo haran-dranomasina ho fanatsarana ny faharetana.
Fanadihadiana sy fanaraha-maso haran-dranomasina - manome torolàlana amin'ny famolavolana programa fanaraha-maso ary koa fanombanana sy fanaraha-maso ny fiaretan'ny haran-dranomasina sy ny toe-karena ara-tsosialy sy toekarena. Ity lesona ity koa dia manangona ny antontan-taratasy fitarihana lalina farany hanampy amin'ny fampandrosoana ny tombana fanombanana.
Fitantanana mifototra amin'ny faharetana - manolotra fitsipika fototra momba ny Resilience-based Management (RBM), izay mampiasa fitsipika ekolojika sy sosialy hametrahana hetsika hiarovana na hanatsarana ny fizotran'ny voajanahary faharetana. Ny lesona dia mamaritra ihany koa ireo ohatra amin'ny fandinihana tranga manerana an'izao tontolo izao, mampiseho ny fomba fampiharana RBM hamahana ny fandrahonana sy ny fanamby manokana.
Paikady fitantanana faharetana - mamaritra ny tetika isan-karazany momba ny fitantanana napetraka manerantany hanohanana ny faharetan'ny haran-dranomasina. Ny paikady dia misy ny faritra arovana an-dranomasina (MPA) ary ny endrika MPA mahatanty, ny fitantanana ny fiantraikan'ny fiovan'ny toetr'andro, ny fampihenana ireo loharanon'ny fahalotoan'ny tany, ny fifehezana ny karazan-javaboary, ny fitantanana ny jono, ny fiatrehana ny aretin'ny haran-dranomasina, ary ny fitantanana faharetana ara-tsosialy.
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoFahatsapana lavitra sy fanaovana sarintany lavitra momba ny fiarovana ny haran-dranomasina
Ny Remote Sensing and Mapping for Coral Reef Conservation Online Course dia natao hanampiana ireo mpitantana an-dranomasina, mpiaro ny tontolo iainana, mpahay siansa, mpanapa-kevitra ary manam-pahaizana momba ny GIS manapa-kevitra raha toa ka afaka manampy amin'ny fampahafantarana ny asa fiarovana sy fanarenana azy ireo ny vokatra lavitra sy ny teknolojia fanaovana sarintany. mifanaraka tsara amin'ny filan'izy ireo. Izy io dia manasongadina ny Allen Coral Atlas, fitaovana vaovao matanjaka manome fidirana amin'ny sary avo lenta ary sarintanin'ny benthic ary geomorphic manerantany amin'ny toeram-ponenan'ny haran-dranomasina. Ity fandaharam-pianarana ity dia mampiseho ihany koa ny fanaovana sarintany tsara amin'ny rakotra vatohara velona amin'ireo faritra kely amin'ny haran-dranomasina mba hitarika ny ezaka famerenana amin'ny laoniny any Karaiba, novolavolain'ny The Nature Conservancy. Azo alaina amin'ny fiteny efatra ilay fampianarana: misokatra amin'ny varavarankely vaovaoanglisy, misokatra amin'ny varavarankely vaovaoEspaniola, misokatra amin'ny varavarankely vaovaofrantsay, ary misokatra amin'ny varavarankely vaovaoBahasa Indonezia.
Ity fampianarana ity dia novolavolaina tamin'ny fiaraha-miasa amin'ny National Geographic Society ary natokana ho an'ny The Nature Conservancy maimaimpoana amin'ny sehatra fampianarana Conservation Training. Ny lesona dia novolavolaina niaraka tamin'ny fandraisana anjara fanampiny avy amin'ny Ivotoerana Arizona State University momba ny Global Discovery and Conservation Science, Planet, The Nature Conservancy Caribbean Division, ny University of Queensland's Remote Sensing Research Center, ary Vulcan Inc.
Fampidirana ny Remote Sensing sy Coral Reef Mapping - mampahafantatra ireo hevi-dehibe momba ny fahatsapana lavitra sy ny fampiharana azy ho an'ny fiarovana ny ranomasina. Ny lesona dia mikendry ny hanome anao fahalalana fototra momba ny fahatsapana lavitra sy ny fanaovana sarintany ireo haran-dranomasina avy amin'ny sary zanabolana. Homena anao ny fitaovana hanapahana hevitra raha afaka manampy ny asa fiarovana anao ny fahatsapana lavitra. Ny lesona 1 dia manome ny fototra iorenan'ny lesona 2 sy 3, ary natao ho an'ny mpitantana sy ny mpitsabo tsy manana fiaviana kely amin'ny fahatsapana lavitra.
Mampiasa ny Allen Coral Atlas - mampahafantatra ny Atlas, ny atiny, ary ny fampiharana ny fitantanana ny haran-dranomasina, ny fitehirizana ary ny fikarohana. Ny lesona dia manome fampahalalana ambadika sy fandalinana tranga ary fanazaran-tena ahafantarana anao amin'ny angon-drakitra ao amin'ny Atlas, mampiseho ny fomba fitetezana ny fitaovan-tsarintany an-tsarintany ary manome anao torolàlana isan-dingana amin'ny fampiasana ny angon-drakitra amin'ny fandrosoana bebe kokoa. fampiharana.
Sarintany marobe amin'ireo haran-dranomasina any Karaiba - mampahafantatra ny haitao lavitra mahatsapa ny sarintany haran-dranomasina amin'ny ambaratonga tsara amin'ny toerana sasany. Miorina amin'ny lesona roa teo aloha, ny lesona 3 dia momba ny teknolojia vaovao hamahana ireo fanontaniana momba ny fitantanana izay mikendry ny fanaronana ny haran-dranomasina mivantana, ny fahasalaman'ny haran-dranomasina ary ny fanaraha-maso ny fanovana eo amin'ny sehatra zanatany. Manome fandinihana tranga sy hetsika mivantana izay ahafantaranay ny sarintany haran-dranomasina Karaiba farany ianao, hampiseho ny fomba fitetezana ireo fitaovana fanaovana sarintany isan-karazany, ary hanomezana topy maso izay azon'ny teknolojia mahatsapa lavitra azo.
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoFamerenana amin'ny laoniny ny haran-dranomasina
Mitodika any amin'ny famerenana amin'ny laoniny ny mpitantana ny haran-dranomasina ho toy ny tetikady hanoherana ny fanimbana ny vatohara ary hampiroborobo ny fivarotan'ny vatohara. Vokatr'izany dia samy mampiasa teknika samihafa manerana ny tany ny olona, ​​ka sarotra ny mifidy ny fomba fiasa mifanaraka amin'izay ilain'ny toerana misy anao. Ny fandaharam-pianarana an-dalam-pivoarana ny Reef Resilience dia natao hanomezana ireo mpitantana sy mpitsabo miaraka amin'ny vaovao momba ny famerenana ny fikarakarana farany ho an'ny tontolo iainana momba ny haran-dranomasina, anisan'izany ny tari-dalana momba ny planina famerenana amin'ny laoniny sy ny famolavolana fandaharanasa sy ny famaritana ny karazana famerenana amin'ny famerenana amin'ny laoniny. Ny fianarana dia ahitana lesona 6 amin'ny teny Anglisy sy Espaniôla amin'ny fanombanana:
Fampidirana ny famerenana amin'ny laoniny sy ny drafitra momba ny tetikasa - mampahafantatra ny teôria ankapobeny sy ny fampiharana ny famerenana amin'ny laoniny ny tontolo iainana sy ny fampiasana azy amin'ny ekôstôlisan'ny haran-dranomasina ary manome dingana mitarika amin'ny famolavolana sy famolavolana programa famerenana ny haran-dranomasina, manomboka amin'ny tanjona amin'ny alàlan'ny famaritana ireo hetsika famerenana amin'ny laoniny, izay miorina amin'ny Torolàlana an'ny mpitantana ny drafitra famolavolana ny famolavolana ny haran-dranomasina (The Conservancy voajanahary).
Famerenana amin'ny laoniny ny fambolena Coral amin'ny fambolena kora - mamariparitra ny dingana atao mikasika ny famerenana ny fambolena saribao mafy amin'ny fampiasana ireo teknika sy fomba fanao fantatra amin'ny hoe 'zaridaina'. Ireo teknika ireo dia ny fanangonana sombintsombin'ny vatohara avy amin'ny vatohara, karazam-boankazo, ny fampielezana sy ny fampiroboroboana ny zanatsoratra eo amin'ny sehatry ny fizahan-tany, ary ny fambolena (na ny fambolena) ny vatohara miverina any amin'ny vatohara.
Famerenana amin'ny laoniny ny fonenan'ny Coral miaraka amin'ny fandrosoana an'i Larval - mamariparitra ny dingana mifandraika amin'ny fampitomboana ny haran-dranomasina amin'ny fampiasana ireo teknika sy fomba fanao fantatra amin'ny anarana hoe fipoahana. Ity lesona ity dia ahitana ny fampahalalana momba ny firaisana ara-nofo amin'ny harena voajanahary, ary mamaritra fomba amam-panao amin'ny fanangonana sy fampiroboroboana ny gorodona amoron-dranomasina, ny fanabeazana ny vatohara vaovao ary ny fampiroboroboana ny famerenana eo amin'ny vatohara na ny fanorenana, ary ny fanamboarana ny vatohara miverina any amin'ny vatohara.
Famerenana ny firafitry ny vatohara ho an'ny fambolena morontsiraka - dia mamaritra ny famerenana ny rafitra ara-batana momba ny tontolo iainana momba ny haran-dranomasina, ny fidirana an-tsokosoko ho an'ny toeram-ponenana izay simba, voaaro, na lasa tsy mety amin'ny fambolena. Ity lesona ity dia mifototra amin'ny Toro-tari-dalana momba ny fitantanana sy ny famerenana amin'ny laoniny ho fanatsarana ny fiarovana ny sisintany: toro-hevitra ho an'ny fampiharana maneran-tany miorina amin'ny lesona naterina tany Meksika (Ny Nature Conservancy).
Famaliana haingana sy famerenana amin'ny laoniny - mamariparitra ny fomba hiomanana, hamaly, ary hanamboatra ny tontolo iainana momba ny haran-dranomasina amin'ny korontana taorian'ny fisehoan-javatra ratsy. Ny torohevitra ato amin'ity lesona ity dia mifantoka amin'ny famaliana ireo antony telo lehibe mahatonga ny fahavoazana: ny rivo-doza tropikaly, ny tohodrano ary ny areti-mifindra aretina. Ny fizotry ny rivo-doza dia mifototra amin'ny Fampandrenesana voalohany sy fanamafisana ny valin-kafatra ho an'ny valan-javaboary an-dranomasina tropikaly any amin'ny valan-javaboahary Puerto Morelos reef. (Ny Nature Conservancy).
Fanaraha-maso ny famerenana amin'ny laoniny - mamaritra ny fomba fitantanana ny tetikasa fanarenana ny haran-dranomasina mba hanombanana ny fahombiazany sy ny fivoarany. Ity lesona ity dia miresaka momba ny fomba amam-panaovana ny fanaraha-maso, anisan'izany ny fomba sy ny metrika izay manombantombana ny zanatanin'ny vatohara tsirairay sy ny fiantraikany ara-tontolo iainana amin'ny famerenana amin'ny laoniny. Ity lesona ity ihany koa dia manome toro-marika ho an'ny fanaraha-maso ny fanaraha-maso standard izay azo ampiasaina mba hampitahana ny tetikasa.
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoAdaptation Design Tool
Ity fampianarana ity dia natao hanampiana ireo mpitantana haran-dranomasina hanan-kery hampiditra ny volavola marani-tsaina amin'ny asa fitantanan'izy ireo amin'ny alàlan'ny fiheverana ny vokatry ny fiovan'ny toetrandro amin'ireo adin-tsaina ara-tontolo iainana sy ny fiantraikany amin'ny fitantanana mahomby. Izy io dia mamaritra ny fizotry ny fampidirana ny fanovana ny fiovan'ny toetrandro amin'ny drafi-pitantanana amin'ny fampiasana hetsika efa nomanina ho toy ny teboka fanombohana, ary koa mitarika fampandrosoana ny paikadim-pahaizana momba ny toetrandro fanampiny ilaina. Maharitra adiny 2 eo ho eo vao vita ilay fampianarana ary misy ireto lesona manaraka ireto:
Fitsipiky ny fikorontanan'ny toetr'andro (20 minitra) - foto-kevitra lehibe momba ny fiarovana ny toetrandro-mahomby, ao anatin'izany ny antony sy ny fomba fanaovana atidoha ary ny hetsika fitantanana ny volavola mba hitantarana ny vokatry ny fiovan'ny toetrandro.
Fampidirana ny fitaovana fanarenana fampifanarahana (20 minitra) - topy maso momba ny Adaptation Design Tool, ny fomba fiasa ary ny fomba fanao tsara indrindra hampiasana azy amin'ny fomba mandaitra.
Fampiharana ny fiheverana ny famolavolana toetr'andro sy ny toetrandro amin'ny hetsika fiarovana sy fitantanana efa misy (45 minitra) - mampiseho ny hetsika 1 an'ny Adaptation Design Tool, izay mampihatra ny fiheverana ny famolavolana ny toetr'andro ho (1) hamantatra ny fiovan'ny toetr'andro amin'ny fahombiazan'ny hetsika fitantanana anao ary (2) handinika izay fiovana tokony hatao amin'ireo hetsika mifototra amin'ny amin'ireo fiantraikany ireo.
Manitatra ny lisitry ny safidy amin'ny fampifanarahana sy ny famaranana ny fampianarana (30 minitra) - dia maneho ny Activity 2 amin'ny fitaovana fanarenana fampifanarahana, izay mamaritra ny banga eo amin'ny drafitra misy anao, manampy anao hampivoatra ireo hetsika vaovao hamenoana ireo disadisa ireo, ary mamarana amin'ny dingana manaraka momba ny fomba ahafahan'ny valiny amin'ny fitaovana ampiasaina hampahafantarana ny dingana hafa amin'ny fiarovana ny tontolo iainana tsingerin'ny.
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoStrategic Communication
Mikasa ny hitaona ny fitondran-tena na hanaitra ny sain'ny olona momba ny olana iray hampandroso ny ezaka fiarovana anao? Ny Mazava ho azy momba ny fifandraisana an-tserasera Strategic vaovao dia afaka manampy anao hiresaka mahomby hahatratrarana ny tanjonao fiarovana! Ity fiofanana ity dia misy fanazaran-tena, toro-hevitra ary loharanom-pahasoavana ary fanadinana hizaha toetra ny fahalalanao ilay fitaovana. Izahay dia nanala ny fifandraisana stratejika ary nanatsotra ny fizotran'ny drafitra mba hahafahanao miasa amin'ny tetikasanao manokana rehefa mianatra ianao. Maimaimpoana ary misokatra ho an'iza na iza io taranja io, saingy miantefa amin'ireo mpitantana sy mpiasan'ny haran-dranomasina. Ny atiny fampianarana dia manarona ny drafitr'asa momba ny fifandraisana: tanjona sy tanjona, teny manodidina, mpihaino (s), hafatra, iraka sy tetika, fandrefesana, ary famintinana plan.